Inona no Fanomezana Tsara Indrindra?
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mongol Myama Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa tzeltal Éwé
Ny vidim-panavotana nomen’​Andriamanitra no fanomezana tsara indrindra, satria ahafahantsika hiaina mandrakizay
MATOAN-DAHATSORATRA | INONA NO FANOMEZANA TSARA INDRINDRA?
“Avy any ambony ny fanomezana tsara rehetra sy ny fanomezana tonga lafatra rehetra, satria midina avy any amin’ny Rain’ny fahazavana eny amin’ny lanitra izany.” (Jakoba 1:17) Hita avy amin’izany fa tena malala-tanana i Jehovah Andriamanitra, ilay Raintsika any an-danitra. Maro be ny fanomezana nataony ho an’ny olona, fa misy iray tena miavaka. Inona izy io? Hoy i Jesosy ao amin’ny Jaona 3:16: “Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.”
Ny Zanany lahitokana tokoa no fanomezana lehibe indrindra nomen’Andriamanitra antsika. Afaka manafaka antsika amin’ny ota sy ny fahanterana ary ny fahafatesana izy io. (Salamo 51:5; Jaona 8:34) Na miezaka toy inona aza mantsy isika, dia tsy ho vitantsika samirery ny hanafaka ny tenantsika amin’ireo. Be fitiavana anefa Andriamanitra, ka nanome an’i Jesosy Kristy Zanany mba ho vidim-panavotana. Afaka manantena ny ho velona mandrakizay àry ny olona mankatò. Fa inona no atao hoe vidim-panavotana? Nahoana izy io no ilaina? Inona no azontsika atao raha te handray soa avy amin’izy io isika?
Ny vidim-panavotana dia vola aloa mba hividianana indray zavatra efa nafoy, na hanafahana olona iray. Milaza ny Baiboly fa tsy nisy ota i Adama sy Eva, ireo ray aman-drenintsika voalohany, tamin’ny vao noforonina. Afaka ny ho velona mandrakizay tao amin’ny tany paradisa àry izy ireo sy ny taranany. (Genesisy 1:26-28) Nafoiny daholo anefa izany, rehefa nifidy ny tsy hankatò Andriamanitra izy mivady ka lasa mpanota. Inona no vokany? Hoy ny Romanina 5:12: “Tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray ho amin’izao tontolo izao, ary avy tamin’ny ota no nidiran’ny fahafatesana, ka niely tamin’ny olona rehetra ny fahafatesana, satria samy efa nanota izy rehetra.” Nandova ota avy tamin’i Adama koa ny taranany ka maty.
Tokony hitovy sanda amin’izay nafoy ny vidim-panavotana aloa. Lasa mpanota i Adama rehefa ninia tsy nankatò an’Andriamanitra. Nafoiny àry ny ainy lavorary. Lasa nandevozin’ny ota ny taranany, ka maty. Tsy ho afaka amin’izany izy ireo raha tsy nisy aina lavorary nafoy, dia ny ain’i Jesosy. (Romanina 5:19; Efesianina 1:7) Soa ihany fa be fitiavana Andriamanitra, ka nanaiky handoa an’io vidim-panavotana io. Afaka ny hiaina mandrakizay ao amin’ny tany paradisa indray àry ny olona. Izany ilay nafoin’i Adama sy Eva.—Apokalypsy 21:3-5.
Hita amin’izany fa ny vidim-panavotana nomen’Andriamanitra no fanomezana lehibe indrindra. “Fanomezana tonga lafatra” izy io, satria mifanaraka tsara amin’ireo lafin-javatra efatra noresahina teo aloha. Andeha hojerentsika izany.
Manatanteraka ny faniriantsika. Tsy te ho faty isika, fa te ho velona foana. (Mpitoriteny 3:11) Tsy ho vitantsika samirery anefa ny hanatanteraka an’io faniriantsika io, fa mila ny vidim-panavotana isika. Hoy ny Romanina 6:23: “Fa fahafatesana no tambin’ny ota, ary fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Kristy Jesosy Tompontsika kosa no fanomezana omen’Andriamanitra.”
Tena ilaintsika. Tsy afaka nanome vidim-panavotana ny olombelona. Hoy mantsy ny Salamo 49:7: “Tsy misy amin’izy ireo mahavita manavotra ny rahalahiny, na manome an’Andriamanitra ny vidim-panavotana ho azy.” Tena mila ny fanampian’Andriamanitra àry isika vao ho afaka amin’ny ota sy ny fahafatesana. Soa fa nanome an’izay ilaintsika izy, “amin’ny alalan’ny fanafahana nentin’ny vidim-panavotana naloan’i Kristy Jesosy.”—Romanina 3:23, 24.
Ara-potoana tsara. Hoy ny Romanina 5:8: “Fony mbola mpanota isika, dia maty ho antsika i Kristy.” Tena tia antsika Andriamanitra, matoa “mbola mpanota isika” dia efa nomeny ny vidim-panavotana. Afaka miandrandra hoavy tena tsara àry isika, na dia mbola mijaly noho ny ota aza aloha izao.
Antony tsara sy tsy misy fitiavan-tena no nanomezana azy. Inona ny antony nanomezan’Andriamanitra ny Zanany ho vidim-panavotana? Hoy ny 1 Jaona 4:9, 10: “Izao no nanehoana ny fitiavan’Andriamanitra tamintsika: Nirahiny ho amin’izao tontolo izao ny Zanany lahitokana mba hahazoantsika fiainana amin’ny alalany. Ary izany fitiavana izany dia tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika.”
Ahoana no ampisehoanao hoe ankasitrahanao io fanomezana io? Tadidio fa nilaza i Jesosy ao amin’ny Jaona 3:16 hoe izay “maneho finoana” azy ihany no ho voavonjy. Ny finoana dia “fiandrasana amin-toky ny zavatra antenaina.” (Hebreo 11:1) Mila mahalala ny marina isika raha te hanana an’izany toky izany. Mampirisika anao àry izahay mba hianatra momba an’i Jehovah Andriamanitra, ilay nanome an’ilay “fanomezana tonga lafatra.” Fantaro koa hoe inona no tokony hataonao raha tianao ny handray soa avy amin’ilay sorom-panavotan’i Jesosy, ka ho velona mandrakizay.
Hahalala an’izany rehetra izany ianao raha mandinika ny fanazavana ara-baiboly, ao amin’ny www.jw.org/mg. Ho faly ny Vavolombelon’i Jehovah hanampy anao hahalala bebe kokoa momba an’ilay fanomezana lehibe indrindra sady handray soa avy amin’izany. Matoky izahay fa hilaza toy izao ianao amin’izay: “Hisaorana anie Andriamanitra, noho izy mamonjy ahy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika!”—Romanina 7:25.
Iza i Jesosy Kristy?